Boxe Française Savate – «Mada 2017» : nanjakan’Analamanga ny fifaninanana | NewsMada
Boxe Française Savate – «Mada 2017» : nanjakan’Analamanga ny fifaninanana
Tontosa, ny alahady lasa teo, tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, ho an’ny boxe française savate. Nisongadina ny mpikatroka avy amin’ny ligin’Analamanga.
Norombahin’ny mpikatroka Analamanga avokoa ireo anaram-boninahitra 23 amin’ireo famaranana 35 niadina, nandritra ny fifaninanam-pirenena teo amin’ny boxe française savate. Anisan’ny nisongadina tamin’izany ny teo amin’ny sokajy «sénior» lehilahy, izay nahazoany medaly volamena 5, tamin’ireo 7 nifaninanana. Mbola noporofoin’i Jhonny indray ny maha andrarezina azy teo amin’ny sokajy – 56 kg. Resiny teo amin’ny famaranana i Ferdinand avy any amin’ny ligin’i Vakinankaratra.
Nanantombo betsaka teo amin’ny traikefa i Jhonny. Tsy nisy very ireo daka sy totohondry nalefany. Manana ny fahaiza-manaony i Ferdinand saingy hita fa tsy mbola ampy tsapa. Manana ny ho aviny kosa nefa izy atsy ho atsy, raha misy dona matetika sy voajerin’ny teknisiana eo anivon’ny federasiona.
Ankoatra izay, nibata fandresena ihany koa i Jacquis, ho an’ny sokajy – 60 kg. Toy izany koa i Herizo, teo amin’ny – 65 kg ary i Sedra -70 niampy ny an-dRabetrena, teo amin’ny, -75 kg.
Namoaka tompondakan’i Madagasikara roa ihany koa Analamanga, teo amin’ny “senior” vehivavy, izay azon’i Tsilavina -48 kg sy ny an’i Fahendrena – 52 kg.
Nitana ny laharana faharoa, tamin’ity fifaninanam-pirenena ity i Vakinankaratra, nahazo fandresena miisa 4. Fahatelo mitovy, Antsiranana sy Atsimo Andrefana izay samy namoaka tompondaka 2 avy.
Dingana manaraka ho an’ny federasiona ny fiatrehana ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, hatao any Kroasia, ny 1- 15 jona ho an’ny sokajy “minime” sy “cadet” ary ny faran’ny volana jona ny an’ny “junior” sy “sénior”.
Mikasa ny handefa mpikatroka miisa 10 amin’ireo sokajy ireo ny federasiona, raha ny nambaran’ny filohany, i Campo Rivo.